musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Maonero Ako paKuuya kweUNWTO Sarudzo Yakumbirwa
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Imwe nyika inofanirwa kusimuka kuUNWTO General Assembly iri kuuya kukumbira vhoti yakavanzika. Heino chikonzero:
Mutungamiriri ane gakava zvakanyanya weWorld Tourism Organisation (UNWTO), Secretary-General Zurab Pololikashvili anoda zvikamu zviviri muzvitatu zvenhengo dzenhengo pamusangano weGeneral Assembly muMadrid kuti usimbiswe zvakare kweimwe temu yemakore mana.
Zvinotora nyika makumi mashanu nenhatu kuti dzirambe temu yake yechipiri.
Imwe nyika inofanirwa kukumbira vhoti yekusimbisa pachivande paGeneral Assembly iri kuuya kuti hurongwa uhu huve hwakarurama.
Ko Zurab Pololikashvili anofanira kusimbiswazve here? Dzvanya pano
Kurambwa kwaitwa nevaimbove Secretary-General vaviri Francesco Frangialli naTaleb Rifai pakati maererano neTN masosi zvakare nyika inotambira Spain, nedzimwe nyika dzinoverengeka dziri kutarisira.
Pamusoro pezvo, pane kushushikana kwemukati nezve kudonha kwetsika kwesangano, sezvakataurwa neUNWTO Ethics Officer mumushumo wake kuGeneral-assembly. Pane kushushikana kuri kuramba kuchikwira pamusoro penzira dzisingabudisi pachena dzemunyori mukuru aripo iye zvino mukutonga kweHuman Resources uye mirairo yebasa.
UNWTO parizvino ine nhengo zana nemakumi mashanu nepfumbamwe. Maererano neChikamu 159 cheMitemo yesangano, “munyori mukuru achagadzwa ne zvikamu zviviri muzvitatu ruzhinji rwenhengo dzakazara dziripo nekuvhota kuGeneral Assembly.”
Izvi zvinoreva kuti nyika ipi neipi yakamanikidza kusabvumidzwa kwemunyori mukuru wepanguva ino, yaizoda mavhoti makumi mashanu nematatu asina kunaka kuti Pololikashvili avhare sarudzo yake kana nyika dzese dziri nhengo dziripo.
Kurambwa hakuna kumbobvira kwaitika munhoroondo yeUNWTO, asi sekureva kwakaita sosi yakabvunzwa na eTurboNews uyo anoziva zvakakwana kuti sangano rinoshanda sei, “mamiriro ezvinhu aripo anokosha zvikuru.”
Zurab Pololikashvili akasarudzwa zvakare nekomiti yepamusoro ichangoburwa muna Ndira 2021 kwenguva ye2022-2025. Komiti iyi yakasangana muna Ndira, kunyange hazvo nguva yagara ichifanirwa kunge iri Chivabvu
Mushumo wakadzama mumagazini yechiFrench Spaces , yakanzi
"World Tourism Organisation, yakanaka kune chero chinhu?"
uye yakaburitswa munaGunyana apfuura, yakasimbisa mamiriro ekusarudzwazve kwePololikashvili ne Executive Council kwakaitika muna Ndira 2021 kekutanga kuburitswa na. eTurboNews.
Mitemo yeUNWTO inopa kuti kusarudzwa kweMunyori Mukuru kunofanira kugara kuchiitika kudzimbahwe reUNWTO muMadrid. Sekureva kwegwaro iri, kanzuru yakafunga kufambisira mberi sarudzo dzemunyori mukuru kusvika mwedzi waNdira, kuitira kuti zvienderane neiyo FITUR trade show. Izvi zvakasarudzwa pamusangano wakapfuura wedare repamusoro muGeorgia, nyika yekwaSecretary-General. Kuita musangano wedare repamusoro muGeorgia kwakasimudza tsiye dzakawanda.
FITUR zvisinei haina kuitika muna Ndira, asi muna Chivabvu, saka gakava reSG kuendesa sarudzo yake kuna Ndira rakanga risingabatsiri. Nekudaro musangano waNdira panguva yeCCIDID-19 yekuvhara yaive mukana wakajeka kwaari, saka akaramba kugadzirisa zuva.
Akatomboramba kugadzirisa zuva mushure mevaimbove vatungamiriri veUNWTO Francesco Frangialli naTaleb Rifai vakatumira tsamba yakavhurika kuburikidza nenzira yekukurudzira yevachangobva kuvambwa World Tourism Network.
Nharo dzevaimbova vanyori vakuru vaviri dzaifanira kuyeuchidza izvozvo sarudzo iyi yanga yagara ichiitwa muchirimo, kubvumira Secretariat uye Executive Council kuti vabvumire bhajeti yegore rinotevera, netarisiro yokuti General Assembly yaizoitwa mumatsutso.
Frangialli naRifai vakapokana kuti sarudzo dzinoda musangano uri pachezvake kwete chaiwo.
Mitemo nezvisungo zvinotungamira maitirwo esarudzo zvinoratidza kukosha kwenheyo yevhoti yakavanzika, chimwe chinhu chichave chakaoma zvikuru kuronga mumusangano chaiwo. "
Vakataura kuti makurukota aisazoenda kuMadrid, kunyanya panguva yedenda. Nyika dzaizovimba nevamiriri vadzo panzvimbo pemakurukota ezvekushanyirwa kwenyika kuti vamiririre nyika yadzo musarudzo. Nehurombo, izvi ndizvo zvaitarisirwa naZurab uye zvakaitika chaizvo. Izvi zvakange zvisina kunaka kune nyika dziri nhengo dzisina embassy muMadrid. Izvi chete, uye kupfupikiswa kwenguva yekuti vatsva vangango kwikwidza vauye pachena zvakakanganisa kuvimbika kwesarudzo.
Hondo yakanga yatanga pakati paZurab Pololikashvili, mumiriri wekusarudzwazve, naShaika Mai bint Mohamed al Khalifa, nhengo yemhuri yehumambo yeBahrain uye Gurukota rezvetsika renyika iyoyo pakati pa2010 na2014, aive iye ega pavatanhatu. anokwanisa kuendesa mapepa ake ekudomwa nenguva uye nemazvo.
Sarudzo yeUNWTO yakangouraya chero hunhu hwakasara muUN System
Nzvimbo dziri padyo neUNWTO dzakadzokorora kutaura "zvisizvo zvakakomba" musarudzo yemunyori mukuru aripo.
eTurboNews yakashuma nezvegweta rakanyora mitemo yeUNWTO. Vaifunga kuti sarudzo dzemuna 2017 dzeSecretary-General dzaifanirwa kunge dzakanzi hadzina basa.
Kugadzwa kweMutungamiriri Mukuru
Pane kushushikana kwemukati pamusoro pehutsika hwekudonha kweUNWTO kusvika pakuti Ethics Officer wesangano, Marina Diotallevi akazvitaura muHuman Resource report inotungamirira kuGeneral Assembly muMadrid. Anotaura nezve "kunetseka kuri kuwedzera uye kusuwa kwekuti maitiro emukati akajeka aivepo mune dzakapfuura UNWTO manejimendi, pakati pezvimwe zvinhu, maererano nekukwidziridzwa, kudzokororwa kwezvinzvimbo uye kugadzwa, zvakangoerekana zvavhiringwa, zvichisiya nzvimbo yakakwana yekusajeka uye kutonga zvisina tsarukano".
Muchokwadi, svondo rino, iyo Spanish Magazine HOSTELTUR yakadzidza kuti munyori-mukuru akagadza Zoritsa Urosevic semukuru mukuru weUNWTO. Ichi chinzvimbo chaicho chinoita kuti ave nhamba yechitatu, mushure memunyori-mukuru uye mumwe director director, weChinese Zhu Shanzhong. Kugadzwa kunotanga kubva Gumiguru 19.
Yekupedzisira Executive Council yakaitwa muna Ndira wegore rino muMadrid, uye pakanga pasina hurongwa hwekugadzwa uku.
Mutungamiriri mukuru, chinzvimbo icho yakanga iri yezvamatongerwe enyika kusvikira zvino, ndiye ave kutonga mapazi eEthics, Culture and Social Responsibility; Innovation, Dzidzo uye Investments; Statistics; Sustainable Development uye Hungwaru uye Kukwikwidza kweTourist Market.
HOSTELTUR also learned that 200,000 Euros that was approved for "inoshanda kuvandudza zvivakwa zvedzimbahwe", had been exclusively spent for the improvement of the office of the secretary-general. This work was done without a public tender as required by UNWTO regulations.
Mukuwedzera, maererano nezvinyorwa, vashandi veGeneral Secretariat vanoramba vachiita telework uye vachazviita kusvika pakupera kwegore, sezvakarongwa.
eTurboNews iye zvino ari kubvunza vaverengi:
Ko Zurab Pololikashvili anofanirwa kusimbiswazve kechipiri seMunyori Mukuru weUNWTO?